सरकारमा रहेका खनाल–नेपाल समुहका तीन मन्त्रीद्वारा संसदीय दलको निर्णय अस्वीकार | Ratopati
सरकारमा रहेका खनाल–नेपाल समुहका तीन मन्त्रीद्वारा संसदीय दलको निर्णय अस्वीकार
भन्छन्, ‘हामी कुनै हालतमा तत्काल राजीनामा दिदैनौँ’
personपंखबहादुर शाही exploreसुर्खेत access_timeअसार ६, २०७८ chat_bubble_outline0
कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै सुरु भएको सत्ता संघर्षको खेल अझै पनि जारी छ । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णालीमा एमालेभित्रको ओलीपक्ष शुरुवातदेखि नै सरकारको विपक्षमा उभियो । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेलले पार्टी एक हुँदा पनि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने हर प्रयत्न जारी गरेका थिए ।
तर, ३ वर्षसम्म उनले चालेका हर कदम र प्रयास सफल भने हुन सकेन । सरकार ढाल्न माओवादीकै केही सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाए पनि उनकै पार्टीको खनाल–नेपाल पक्षले नमानेपछि गत असोजतिर चालेको यो कदमबाट कँडेल पछि हट्नुपर्यो‌ । सर्वोच्चले माओवादी र एमाले पार्टी ब्यूँताइदिएपछि एमालेले कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन गृहकार्य थाल्यो । कँडेलले संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे । खनाल–नेपाल समुहले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । वैशाख ३ मा माधव समुहका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पुनः तुहियो ।
पार्टीले फ्लोर क्रस गर्ने चारैजनाको सांसदलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै चारैजनाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न चौंथो पटक संघर्ष गरिरहेका छन् ।
तर, विश्वासको मत दिएर शाही सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री भने उनको योजनासामु पुनः तगारो बनेका छन् । उनीहरुले एमाले संसदीय दलको निर्णय र निर्देशनको ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । संसदीय दलको निर्णय, निर्देशन नै अवैधानिक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, तीन जना मन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरे र त्यसलाई बहुमतले पारित गराए । उनीहरु एमालेले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागि भएका छैनन् । तर, माधव समुहको निर्णायक पात्र मानिएका प्रकाश ज्वाला बैठकमा सहभागी बनेका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा समेत विपक्षी दलको कुर्सीमा बसे ।
तर सो निर्देशनलाई मन्त्रीत्रय अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले संसदीय दलको निर्णय नै अवैधानिक भएकाले कुनै हालतमा तत्काल राजीनामा नदिने रातोपाटीलाई बताए । उनी भन्छन् –‘केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै हालतमा सरकारबाट फिर्ता हुँदैनौँ ।’
केन्द्रको विवाद मिलेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी बनेपश्चात सरकारबाट फिर्ता हुने थापाले बताए । यतिमात्र हैन यामलाल कँडेलले आफु मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा अवैधानिक बैठकहरू बोलाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘दलको बैठक त वैधानिक हुनप¥यो नी ! प्रदेश कमिटीको बैठक नै नबसेर, अझ त्यसमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर, हामीलाई दिएको निर्देशन हामीले मानिदिनुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यो सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको भनाइ यस्तो छ :
गर्न दिनुस न । हामीलाई पहिले पनि कारबाही गरिएकै हो । के फरक पर्छ र ? फेरि अर्को कुरा के भने कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कँडेल इन्चार्ज हुनुहुन्न । उहाँ त पार्टीको सह–इन्चार्ज हो । यहाँ त युवराज ज्ञवाली हो नि इन्चार्ज । सर्वोच्च अदालतले त त्यही भन्यो । नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट छानिएका पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिनु भनेर । अहिलेको यो कमिटी त अवैध हो । त्यसैले कुन पार्टीले कारवाही गरेको मान्ने ?